Banyere nchekwa nchekwa nke Outlook (PST)
Mbido > ngwaahịa > DataNumen Outlook Repair > Banyere nchekwa nchekwa nke Outlook (PST)
A na - eji faịlụ nchekwa nkeonwe, yana ndọtị faịlụ nke .PST, ngwaahịa nkwukọrịta Microsoft dị iche iche, gụnyere Microsoft Exchange Client, Izi ozi Windows na ụdị Microsoft Outlook niile. PST bụ ndebiri nke “Tebụl Nchekwa Onwe Onye”.
Maka Microsoft Outlook, ihe niile, gụnyere ozi ozi, nchekwa, posts, nhọpụta, arịrịọ nzute, kọntaktị, ndepụta nkesa, ọrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ, ndetu, wdg. echekwara na mpaghara na faịlụ .pst kwekọrọ, nke na-adịkarị na folda akọwapụtara.
Maka Windows 95, 98 na ME, folda ahụ bụ:
mbanye: WindowsApplication DataMicrosoftOutlook
draịva: WindowsProfilesuser name Obodo Ntuziaka Ngwa DataMicrosoftOutlook
Maka ihe nkesa Windows NT, 2000, XP na 2003, folda ahụ bụ:
draịva: Documents na aha njirimara Aha Mbùrù MberedeApplication DataMicrosoftOutlook
draịva: Documents na aha njirimara Aha njirimara NgwaMicrosoftOutlook
Maka Windows Vista ma ọ bụ 7, folda ahụ bụ:
draịva: Aha njirimara Aha njirimara AppDataLocalMicrosoftOutlook
Maka Windows 8, folda ahụ bụ:
ụgbọala: Ndị ọrụ AppDataLocalMicrosoftOutlook
ụgbọala: Ndị ọrụ RoamingLocalMicrosoftOutlook
I nwekwara ike chọọ faịlụ "Outlook.pst", aha ndabara nke faịlụ Outlook .pst, na kọmputa gị iji chọta ọnọdụ nke faịlụ ahụ.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nke faịlụ PST, mee nkwado ndabere ya, ma ọ bụ mepụta ọtụtụ faịlụ PST iji chekwaa ọdịnaya dị iche iche.
Dika echekwara ozi nkwukọrịta onwe gị na ozi gị na PST faịlụ, ọ dị gị ezigbo mkpa. Mgbe ọ bụ emeru n'ihi ihe dị iche iche, Anyị na-akwado gị ka ị jiri DataNumen Outlook Repair iji weghachite data niile na ya.
Microsoft Outlook 2002 na nsụgharị ndị mbụ jiri usoro faịlụ PST ochie nke nwere file size ịgba nke 2GB, na ọ na akwado naanị koodu ederede ANSI. A na-akpọkwa usoro faịlụ PST ochie ka usoro ANSI PST. Ebe ọ bụ na Outlook 2003, a webatara usoro faịlụ PST ọhụrụ, nke na-akwado faịlụ dị ka 20GB (oke a nwekwara ike ịbawanye na 33TB site na imezi ndekọ) na koodu Unicode. Ọkpụkpọ faịlụ PST ọhụrụ a na-akpọ usoro Unicode PST n'ozuzu ya. Ọ dị mfe gbanwee faịlụ PST site na usoro ANSI ochie na usoro Unicode ọhụrụ na DataNumen Outlook Repair.
Enwere ike izo ya faịlụ PST na paswọọdụ iji kpuchido ozi nzuzo dị na ya. Otú ọ dị, ọ dị mfe ojiji DataNumen Outlook Repair imebi nchebe na-enweghị achọrọ mbụ okwuntughe.